२० वर्ष अघि ढलेथ्यो बर्लिन को पर्खाल
Listen to above Podcast - Fall of the Berlin wall.
ब्रिटेन बाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक नेपाली पत्रिका एभरेष्ट टाइम्स का सम्पादक शशी पौडेल को आवाज मा २० वर्ष अगाडि बर्लिन को पर्खाल ढलेको विवरण सुन्नुहोस् । शशी पौडेल यो पोडकास्ट मा आफूले देखेको कुराहरु वर्णन गर्दैछन् ।
हुन त यो पोष्ट नोभेम्बर ९ कै दिन पोष्ट गर्नु पर्ने थियो होला तर पनि आज पोष्ट गर्दैछु । जर्मनी अनि त्यसमाथि बर्लिन को पर्खाल भनेर धेरै नै सुनिएको भएपनि म चाँहि प्राय: बर्लिन को पर्खाल ढालिएको प्रंसग सँग चाँहि अलि बेखबर नै रहेछु । साँच्चै यो बर्लिन को पर्खाल ढालिएको घटना त एउटा ऐतिहासिक घटना रहेछ । जर्मनी भन्नासाथ मलाई त हिटलर को मात्र याद आउँथ्यो तर त्यसबाहेक यो बर्लिन को पर्खाल पनि ऐतिहासिक रहेछ ।
यो बर्लिन को पर्खाल ले सहरलाई मात्र नभइ, जर्मनीलाई नै पूर्वि र पश्चिम जर्मनी मा विभाजन गरेको थियो । सन् १९६१ को अगस्ट १३ देखि पूर्वी बर्लिनलाई घेरेर पर्खाल बनाउन थालियो । त्यो १३ फिट अग्लो १ सय ७ किलोमिटर लामो कंकि्रटको पर्खालको नजिक पुग्नेलाई देख्ने बित्तिकै गोली ठोकिन्थ्यो । भत्कने बेलासम्ममा पश्चिमतिर भाग्न खोज्ने कम्तीमा सय जना मारिए। तैपनि मौका पाउनेबित्तिकै भाग्थे पूर्वी जर्मनहरु। दिनहुँ सहरको पश्चिम भागमा काम गर्न जाने ६० हजारको आवागमन र आजीविकाको अधिकार खोसियो । तैपनि त्यस पर्खाललाई लाजै नमानी गर्वका साथ कम्युनिस्टहरुले ‘फासिस्ट विरोधी रक्षा पर्खालु भन्ने गर्थे। सन् १९८९ को नोभेम्बर ९ साँझ ७ बजे शीतयुद्धको कुख्यात प्रतीक मानिने पर्खाल भत्काउन सुरु भयो। अनि क्रमशः मध्य तथा पूर्वी युरोपबाट सोभियत संघको प्रभुत्व र अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन समाप्त भयो।
pic by: milan
हो आज, त्यही पर्खाल ढालिएको २० वर्ष बितिसकेछ, अनि बर्लिन पर्खाल ढालिएको तथा अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन समाप्त भएको मा जर्मनी मा ठूलो खुशियाली मनाइँदैरहेछ । थाहा पाउनेलाई त खासै केही रोचक नलाग्ला तर धेरै थाहा नपाउने का लागि भने माथि को पोडकास्ट उपयोगी लाग्न सक्छ ।
*शशि पौडेल को आवाज मा रहेको पोडकाष्ट बिबिसी नेपाली सेवा को नोभेम्बर को अंक बाट लिइएको हो । माथि का सबै फोटो इन्टनेट मा खोजखाज गरिएको हो ।
For Further Reading of Berlin's wall.
NagarikNews : पर्खाल नढलेको भए !
BBC: The night the Berlin Wall fell
BBC: Where is the Berlin Wall now?
BBC: The world remembers the fall of the wall
zippo November 14, 2009 at 7:18 AM
मित्र धेरै धेरै धन्यवाद जहिले बेर्लिनको पर्खालको बारेमा सुनुन्थियो तर क् हो थाहा नै थिएन। म अब तिम्रो ब्लग नियमित हेर्ने गर्नु पर्‍यो।
Aakar November 14, 2009 at 10:30 AM